I-Infer yeNtsha yeNkokeli eNtsha: Chonga kwaye uthumele ezona zikhokelo zibalaseleyo kwiNtengiso | Martech Zone
Amashishini asokola ukutolika iintaba zedatha malunga nabathengi kunye nezinto ezibakhuthazayo. Kuphantse kube nzima ukubona ihlathi emithini xa abantu begxile kwinkqubo yabo yokurekhoda ngokuchasene nokufumana ulwazi oluncedo kuyo yonke imiqondiso kwiinkqubo ezingafaniyo ezinjengeSalesforce, iMarketo kunye noGoogle Uhlalutyo, kunye nemithombo engacwangciswanga kwiwebhu.
Zimbalwa iinkampani ezinezixhobo okanye ubuchule bokumba idatha yabo kwaye bayisebenzise kubahlalutyi egqiba ukuba leliphi ithemba eliza kuthenga iimveliso zabo, kwaye nini. Abo bazama ukujongana nomceli mngeni ngokufaka amanqaku kwiinkqubo zabo zokuzenzekelayo kufuneka bachaze ngesandla imithetho esekwe kumathumbu abo kunye nakwiseti encinci yomsebenzi womsebenzisi.
Kwaye ngelixa ezinye iinkampani zinomjelo ozinzileyo wezinto ezingenayo, ezinye zixhomekeke kwintengiso ephumayo kunye nentengiso ekujoliswe kuyo ukuqhuba ukukhula. Eyona ndlela iqhelekileyo kukuthenga uluhlu olukhulu lwezikhokelo ezithandabuzekayo kunye nethemba lokufumana amathemba ambalwa, kodwa oku kufuna ixesha elininzi kunye nemali.
Ukwahlula amanqaku kwangaphambili kunokwahluka njani kunqaku lwendabuko kumanqaku entengiso?
Endaweni yokongeza amanqaku ngamanyathelo enikiweyo, iimodeli zethu zokufumana amanqaku zisebenzisa ukufunda ngomatshini okunamandla kwimigca ebonakalayo yedatha yomsebenzi ngaphakathi kweqonga lokuzenzekelayo lenkampani. Amaqela athengisayo kunye nentengiso anokusebenzisa amanqaku okuziphatha ukuqikelela ukuba leliphi na ithemba elizakuguqula kwezi veki zintathu zilandelayo.
Infer uyisombulula njani kwaye kukho naziphi na iindlela ezilungileyo ezinxulumene nokuphunyezwa?
Sivelisa uqikelelo lwabathengi oluchanekileyo, oluchanekileyo ngokohambo lwabathengi kulo lonke uhambo lwabathengi, ezinceda iinkampani ukuba zifezekise iilifti kumanqanaba okuphumelela, ukuguqula okukhokelayo, ubungakanani beedili kunye nemali ephindaphindayo. Iimodeli zethu ezifanelekileyo zisebenzisa ukuqikelela kubahlalutyi kunye nokufunda komatshini okuqhubela phambili ukufumanisa ukuba umntu ukulungele na ukuthenga imveliso ethile, kwaye iimodeli zethu zokuziphatha zichonga ukuba zinokuthenga kungekudala.
Sikwenza oku ngokuhlalutya imiqondiso ephambili-njengemodeli yeshishini lenkampani, abathengisi betekhnoloji, ukuthunyelwa kwemisebenzi efanelekileyo, ukufayilwa esidlangalaleni, ubukho kwezentlalo, imisebenzi yewebhusayithi, idatha yokuthengisa ezenzekelayo, idatha yokusetyenziswa kwemveliso kunye nolunye uphawu. Sifumanise ukuba abathengi bethu bavula elona xabiso xa besebenzisa i-Infer ukuze bangacoci kuphela kwaye babeke phambili izikhokelo zabo, kodwa ukwandisa imikhankaso yentengiso, ukuphucula intengiso ephumayo, ukwenza ukondla okukhokelayo okrelekrele, uyilo lwezivumelwano zenkonzo yokuthengisa, njl. Ukuziqhelanisa nokubona iinkampani zisebenzisa i-4X4 elula kunye nokuziphatha kwamanqaku okubanceda ukuba baphuhlise iinkqubo ezijikeleze amacandelo ahlukeneyo, umzekelo ngokuthumela eyona ilungileyo, enokuthengwa ikhokelela ngqo kwii-reps zabo eziphezulu.
yethu Ukungenisa iiNtsha ezintsha Ukubonelela kubonelela ngamaqela athengisa ngomthombo omtsha wamathemba akumgangatho ophezulu ngokusebenzisana nabanikezeli beenkcukacha eziphezulu ezinje nge-InsideView, kunye nokusebenzisa iimodeli ezizezakho ezizezona zichonga izikhokelo ezifanelekileyo zenkampani. Amaqela entengiso ahlala esebenzisa i-Infer ukufumana amanqaku akhokelayo ngokwawo, kodwa ngoku banokuthenga izikhokelo ezitsha ezivela kuthi ngokuthe ngqo, basebenzise iimodeli zethu ezikhethekileyo ezilungiselelwe ukufumana abafowunelwa ababandayo, kwaye bahlawule kuphela iiakhawunti ezilungileyo.
Zeziphi umahluko ophambili ka-Infer?
Sahlukile kwisithuba sokuxelwa kwangaphambili ngenxa yezizathu ezimbalwa- okokuqala nokuphambili ngenxa yeseti yethu enzulu kunye nokugxila kweemveliso zokufumana amanqaku. IDNA yethu Yenziwe yinkcubeko eyomeleleyo yobunjineli evela kuGoogle, Microsoft kunye neYahoo. Sikhohlakele ngokufumana idatha kunye nokufumana iindawo apho inzululwazi yedatha inokuvula elona xabiso liphezulu kwintengiso ye-B2B kunye nentengiso.
Umsebenzi we-Infer kukunceda iinkampani zikhule ngamandla esayensi yedatha. Ubukrelekrele bethu bokuqikelela bunceda amandla kwinani lezicelo ezahlukeneyo zentengiso kunye nentengiso:
U kucoca -Ngokukhawuleza chonga izikhokelo ezilungileyo ngelixa ucoca yonke ingxolo (umkhombandlela ombi).
Ukubekwa phambili - Ukubeka phambili phambili kukhokelela ekuThengiseni kugxile kumathemba abonisa imiqondiso yokuthenga eyomeleleyo kwaye kunokwenzeka ukuba babe nefuthe elikhulu kwingeniso.
Iinkokeli eziNtsha -Ukuthengiswa okuphuma kwi-Fuel ngokuchonga eyona nto ifanelekileyo yenkampani engekhoyo ngoku kwiziko ledatha yakho.
Ukuphuhliswa -Ukubeka iliso kukhokelela kwindawo yolondolozo lwedatha yokuthumela ukubuyela kwintengiso kwakamsinya nje ukuba iphinde ibandakanyeke.
Yenza iideshibhodi Isikhokelo sokwenza izigqibo, jonga iindlela ezivelayo, kunye nokulandela umkhondo wokuba ukuveliswa kwemfuno kuxhokonxa njani umbhobho wakho.
Ngenxa yokuba injongo yethu ingazange ibe yeyokwakha inkampani yokubonisana, sihleli sigxile kwimodeli yokusebenza kunye nokuqhuba okuchaphazelayo, iziphumo eziphindaphindayo kubathengi bethu ngokuchasene nokuxhomekeka kakhulu kwiinkonzo. Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukhuphiswano lokubhaka kunye nokuvumela ukugqwesa kobugcisa kunye nobunjineli, kunye nokusebenza kwemodeli ukwenza intetho.
tags: thalelainfer umnatha omtsha okhokelayoukukhokela amanqakunet izikhokelo ezintshaUhlalutyo oluqikelelweyoukufumana amanqaku kwangaphambiliukuthengisa
USean wenza ubugcisa bokubeka indawo, ukuthumela imiyalezo kunye neqhinga lokuya kwintengiso ngokubanzi kwi-Infer's trove yeemodeli zohlalutyo lwesizukulwana esilandelayo. Xa wanelisekile Ngenisa umthengi ngokwakhe, uSean wajoyina i-Infer evela eNitro, inkampani yesoftware esekwe eSan Francisco, apho yaphuhlisa kwaye yakhokela iqela eliphumeleleyo lokuthengisa kwihlabathi liphela. USean uphethe izidanga eziphambili kwiSuffolk Sawyer School of Business naseMntla mpuma ngokwahlukeneyo kurhwebo lobuchule kunye nolawulo lweprojekthi.